Umzi mveliso we-25G Series | Kwichina 25G Series Abavelisi, abaXhasi
25Gb / s SFP28 CWDM 40km DDM EML Duplex LC transceiver ebonakalayo
I-SFP28 transceivers ziyilelwe ukusetyenziswa kwikhonkco le-Ethernet ukuya kuthi ga kwi-25.78 Gb / s yenqanaba ledatha kunye nobude bekhonkco be-40KM. Ziyathobela i-SFF-8472, kwaye ziyahambelana ne-SFF-8432 kunye neenxalenye ezifanelekileyo ze-SFF-8431. Ii-transceivers ezibonakalayo ziyahambelana nemfuno yeRoHS.
25Gb / s SFP28 LAN-WDM 40km DDM EML Duplex LC transceiver ebonakalayo
25Gb / s SFP28 CWDM 10km DDM EML Duplex LC transceiver ebonakalayo
I-SFP28 transceivers ziyilelwe ukusetyenziswa kwikhonkco le-Ethernet ukuya kuthi ga kwi-25.78 Gb / s yenqanaba ledatha kunye ne-10km ubude bekhonkco. Ziyathobela i-SFF-8472, kwaye ziyahambelana ne-SFF-8432 kunye neenxalenye ezifanelekileyo ze-SFF-8431. Ii-transceivers ezibonakalayo ziyahambelana nemfuno yeRoHS.